TSY FANDRIAM-PAHALEMANA : Mahazo vahana ny fanendahana sy mpanao sinto-mahery anaty taksibe
Mitady izay fomba hanatsarana ny asa ratsiny hatrany ireo mpanendaka sy mpanao sinto-mahery eto an-drenivohitra. 8 août 2017
Fantatr’izy ireo fa efa maro ireo andiana polisy mivezivezy eny amin’ny arabe dia miezaka manova ny paikady ratsiny indray ry zalahy amin’izao fotoana izao.
Tato anatin’ny roa herinandro monja dia fiara fitanteram-bahoaka miisa telo no indray nidiran’ireo mpanendaka an-keriny.
Najifa tsy nisy niangana avokoa ny vola sy ny firavaraka tany amin’ireo mpandeha hatramin’ny saran-dalana teny amin’ilay mpamily mpanampy. Nisehoan’io tranga io ny teny Betongolo, Isotry ary vao tamin’ny alakamisy lasa teo no lasibatra ihany koa ny taksibe iray tetsy Besarety. Raha ny fitantaran’ireo lasibatra dia mitovy tsy misy valaka ny tetikady ampiasan’ireo olon-dratsy. “Mody miditra sahala amin’ny tsy olon-dratsy izy ireo.
Tsy misy ahafantarana azy mihitsy na ny kely aza ary mody maka seza tahaka ny besinimaro. Manao andiany telo ka hatramin’ny dimy lahy izy amin’izany. Tsikaritra fa misy fihetsika iombonana ataon’izy ireo dia eo amin’izay vao miara-mitsangana mandrahona ny mpandeha iray fiara ry zalahy”, hoy ny fitantaran’ny loharanom-baovao voaray. Antsibe, sabatra ary misy amin’izy ireo aza no mitondra basy mihitsy.
“Hampihorohoroany amin’ireo fitaovam-piadiana ireo mpandeha mba tsy hisy hihetsika na hiantso vonjy, ny raika lahy miambina ny varavaran’ny fiara mba tsy hisy hivoaka ary ny namany sisa kosa mitaky ny vola sy finday any amin’ireo mpandeha”, hoy hatrany ny fanazavana. Tatazan’izy ireo amin’ny satroka sahalan’ireny mitaty rakitra ireny ny vola sy ny ny volamena any amin’ireo mpandeha, ary aorian’io dia vaky mitsoaka ry zalahy.
Manao ny ezaka hatrany anefa ny polisim-pirenena amin’ny fanenjehana ireo mpanao ratsy saingy tsy mitsaha-mitombo izy ireo. Misy aza no efa zatra miditra ny fonja mihitsy noho ny asa fanendahana fanaony. Porofon’izany ny fahafantarana fa saika efa nisazy sy vao nivoaka ny fonja avokoa ny ankamaroan’ireo mpanendaka tratra eto Antananarivo. Isan’izany i Baina izay efa nigadra teny Antanimora kanefa mbola voasambotra ho namerin- keloka indray. Ity farany dia mpanendaka gaigilahy eny amin’ny faritra manodidina an’Antohomadinika eny.
Fitarainana maro no voarain’ny polisy amin’ny fisiana lehilahy manendaka eny an-toerana na amin’ny andro mbola mazava be izao aza. Ny faran’ny herinandro lasa teo olona iray no lasibatra, niantso mpitandro filaminana avy hatrany ity farany ka rehefa natao ny velam-pandrika dia tra-tehaka i Baina. Niezaka nanavotr’aina nitsoaka ihany ny tenany raha nahatazana ny polisy saingy efa voahodidina ka tsy afa-niala lavitra intsony. Ny finday, ny pôketra no tena ataony mahita faisana. Ny sabotsy teo no natolotra ny fitsarana ny tenany ary naverina eny Antanimora indray. Ireo izay efa lasibatra dia mangataka ny mba hanasaziana faran’izay henjana an’ireo izay tratra mba tsy hisian’ny famerenan-keloka tahaka izao.